Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina New York JFK mankany Lisbon amin'ny TAP Air Portugal izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina New York JFK mankany Lisbon amin'ny TAP Air Portugal izao.
Ny vavahadin'ny TAP 10 any Amerika Avaratra amin'izao fotoana izao dia ahitana an'i Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, ary Washington, DC (Dulles).
TAP Air Portugal dia miverina any amin'ny seranam-piaramanidina JFK sy Newark any New York miaraka amin'ny sidina avy any Lisbonne.
Ny TAP dia hiasa tsy an-kiato isan'andro avy any JFK manomboka ny 7 Novambra ka hatramin'ny 31 Janoary 2022, ary mihena ho sidina efatra isan-kerinandro manomboka ny 2 Febroary ka hatramin'ny 25 Martsa.
Ny sidina vaovao, TP 210, dia hiainga JFK amin'ny 10 ora alina, ho tonga any Lisbonne amin'ny 9:30 maraina, ny ampitso maraina.
TAP Air Portugal dia miasa indray avy amin'ireo vavahady 7 rehetra ao Etazonia miaraka amin'ny fiverenan'ny serivisy avy any New York's Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena John F Kennedy omaly alina. Miaraka amin'ny serivisy isan'andro manomboka amin'ny JFK ka hatramin'ny Janoary sy mandritra ny vanim-potoana fahavaratra, ny New Yorkers dia hanana sidina telo isan'andro mankany Lisbonne amin'ny TAP, avy any JFK sy Newark Liberty International.
paompy dia hiasa tsy an-kiato isan'andro manomboka amin'ny JFK nanomboka ny 7 Novambra ka hatramin'ny 31 Janoary 2022, nihena ho sidina efatra isan-kerinandro (ny Alatsinainy, Alarobia, Zoma ary Alahady) manomboka ny 2 Febroary ka hatramin'ny 25 Martsa. JFK Hiasa isan'andro indray ny serivisy mandritra ny fahavaratra, manomboka ny 27 martsa.
Ny sidina vaovao, TP 210, dia hiainga JFK amin'ny 10 ora alina, ho tonga any Lisbonne amin'ny 9:30 maraina, ny ampitso maraina. Ny sidina miverina, TP 209, dia hiainga ao Lisbonne amin'ny 5 ora hariva, ary tonga ao amin'ny JFK amin'ny 8 ora alina.
Ny zotra vaovao dia hiasa amin'ny fiaramanidina Airbus A330-900neo an'ny TAP, ahitana ny Airspace vaovao avy amin'ny kabin'ny Airbus.
Ny famolavolana sy ny famolavolana ny kabine dia mamorona toe-tsaina vaovao sy maoderina, miaraka amin'ny seza misy fipetrahana lalindalina kokoa amin'ny Economy, amin'ny saron'ny seza misy aloky ny maitso sy volondavenona, ary miaraka amin'ny efitranon-tongotra bebe kokoa amin'ny EconomyXtra, amin'ny aloky ny maitso sy mena.
Ny haavon'ny seza amin'ny toekarena ara-dalàna dia 31 santimetatra, raha toa kosa ny EconomyXtra dia manolotra efitranon-tongotra telo santimetatra fanampiny, ho an'ny haavon'ny 34 santimetatra. Ny A330-900neo dia manana seza 168 ao amin'ny Economy ary seza 96 ao amin'ny EconomyXtra.
Ao amin'ny kilasin'ny orinasa Mpanatanteraka an'ny TAP, ny TAP dia manolotra seza 34 miendrika fisaka vaovao izay mihoatra ny enina metatra ny halavany rehefa mipetrapetraka tanteraka. Ny sezan'ny orinasan'ny TAP dia misy ny fivoahana ho an'ny USB sy ny plugs elektrika tsirairay, ny fifandraisana amin'ny écouteur, ny jiro famakiam-boky tsirairay, ary ny toerana bebe kokoa - ao anatin'izany ny efitrano fitahirizana bebe kokoa.
Ny vavahadin'ny TAP 10 any Amerika Avaratra amin'izao fotoana izao dia ahitana an'i Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, ary Washington, DC (Dulles). Ny 11 Desambra, TAP Air Portugal dia hampiditra ny hetsika Karaiba voalohany ihany koa, miaraka amin'ny serivisy tsy an-kiato eo anelanelan'i Lisbonne sy Punta Cana ao amin'ny Repoblika Dominikanina, TAP's 11th Vavahadin'ny Amerika Avaratra.